Miatrika valanaretina roa ny ao Boeny: tratran’ny covid-19 ny mpiasan’ny Fitsarana nirahina tany Mahajanga | NewsMada
Miatrika valanaretina roa ny ao Boeny: tratran’ny covid-19 ny mpiasan’ny Fitsarana nirahina tany Mahajanga
Ahitana ny coronavirus avokoa izany izao ny faritany enina. Mpiasan’ny Fitsarana namita iraka tany Mahajanga no tratran’ity valanaretina ity, araka ny nambaran’ny eo anivon’ny CCO, omaly. « Tsy misy soritr’aretina izy io. Mipetraka aty Antananarivo fa nirahina niasa any an-toerana… », hoy ny mpitondra teny, ny Pr Vololontiana Hanta.
Ankoatra izany, mbola voaporofo fa foiben’ny coronavirus ny ao Toamasina. Nahitana tranga vaovao miisa 17 indray tany an-toerana. Vokatry ny fitiliana natao miisa 134 ny nahazoana ireo antontanisa rehetra ireo. Na izany aza, nisy dimy sitrana tany Toamasina ka lasa 119 izany ireo nahafeno ny fepetra fahasitranana ka nalefa nody. Tafakatra 322 izany izao tratran’ny coronavirus manerana ny Nosy, hatramin’ny 19 marsa noho mankaty.
Anatin’ny ady amin’ny dengue ny any Mahajanga
Etsy an-daniny, iray sisa ahina ny toe-pahasalamany ho an’ny any Toamasina fa efa tafavoaka ny iray. « Mbola mila « oxygène » kosa ny iray eny amin’ny hopitalin’Anosiala », hoy ihany ny CCO. Mijanona ho iray ny maty hatramin’izao ary 203 ireo mbola tazonina any amin’ny hopitaly sy arahi-maso.
Tsiahivina fa mbola anatin’ny ady amin’ny valanaretina dengue ny any Mahajanga amin’izao fotoana izao na efa nihena aza ireo marary tany amin’ny hopitaly. Tonga indray koa ity ny coronavirus.
Miisa valo ireo mpiasan’ny Fitsarana tratran’ny coronavirus
Manampy izany, tafakatra valo izany izao ireo mpiasan’ny Fitsarana tratran’ny covid-19. Fito ireo tany Toamasina ary niampy ity iray any Mahajanga ity.
Nahatsapa ny eo anivon’ny CCO fa efa nisy fiovana ireo olona eny an-dalambe, araka ny fahitan’izy ireo izany. « Manao arovava avokoa ireo rehetra hita eny. Ilay fifampikasohana sy elanelana iray metatra kosa tena tsy mbola voahaja… Arakaraka ny fanarahantsika ny fepetra no afahantsika mialoha amin’izao ady izao sy hiverenantsika amin’ny fiainana andavanandro », hoy ihany izy ireo.